MRB လူများရေတွက်ကင်မရာ HPC008
ဘတ်စ်ကားများအတွက် MRB HPC088 အလိုအလျောက်ခရီးသည်ရေတွက်စနစ်
MRB ကြိုးမဲ့လူများတန်ပြန် HPC005
MRB Door လူများကကောင်တာ HPC001
MRB ESL စျေးနှုန်းစနစ် HL290
“ ခေါင်း” ကင်မရာကိုရေတွက်နေသည့်လူများ
လူများရေတွက်ကင်မရာကိုတပ်ဆင်ရန် Plug and Play
ရှန်ဟိုင်း Pudong အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌“ Black Tech” ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ဤလူများတွက်ကင်မရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရှန်ဟိုင်း Pudong နိုင်ငံတကာလေဆိပ်၌တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုရှန်ဟိုင်းတီဗီမှတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးအမည်းရောင်နည်းပညာအဖြစ်ချီးကျူးခဲ့သည်၊ သတင်းအတွက်ဗီဒီယိုသည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။
ငါတို့တော်တော်များများ လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်။ ခိုးကူးခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် website တွင်အကြောင်းအရာများစွာကိုမတင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းကို ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားမင်းထံပို့နိုင်သည် လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်.
HPC008 လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ် Hikvision နှင့်ဆင်တူသည် လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်ဒါပေမယ့် MRB လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ် Hikvision နှင့်မတူသောအားသာချက်များရှိသည် လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်မရ။ ၎င်းသည်ဆိုင်များကိုတိကျစွာရေတွက်နိုင်သည့်ဆိုင်အသွားအလာအချက်အလက်များအပေါ်တိကျသောစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဗီဒီယိုအခြေပြုခရီးသည်စီးဆင်းမှုစာရင်းဇယားကိုအသုံးပြုသည်။ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုအနေနှင့်တံခါးတစ်ခုစီမှလူအဝင်အထွက်နှင့်လူစီးဆင်းမှု ဦး တည်ချက်တို့သည်အားကောင်းသောလိုက်လျောညီထွေမှု၊ မြင့်မားတိကျမှုနှင့်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းစသည့်လက္ခဏာများရှိသည်။ အင်အားကောင်းသောခရီးသည်စီးဆင်းမှုစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်သည်ဖောက်သည်များအတွက်အစီရင်ခံစာများစွာကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများအားသိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် Third-party software systems များနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ Hikvision နှင့်မတူပါလူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်, MRB လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်အရာ ၀ တ္ထုခြေရာခံခြင်းနည်းပညာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရည်ညွှန်းနည်းပညာ၊ လူသားထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာနှင့်လမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းပညာတို့ပါ ၀ င်သည်။ နေရာတစ်ခုစီ၏ဝင်ပေါက်များနှင့်ထွက်ပေါက်များတွင်ခရီးသည်စီးဆင်းမှုဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောခွဲဝေမှုဖြစ်သည်၊ သိပ္ပံအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာမခံချက်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြေခံကိုပေးသည်။ ဖောက်သည်လမ်းကြောင်းအလိုက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသောအလုပ်ချိန်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီးနှိုးဆော်သံချိတ်ဆက်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အထူးအခြေအနေများတွင်လူ ဦး ရေကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ MRB လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ် အဓိကအားဖြင့်ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်လက်လီဆိုင်ခွဲများ၊ ကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များ၊ လူထုဆွဲဆောင်မှုများ၊ ပြပွဲခန်းမများ၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လူစည်ကားသောနေရာများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပါ။
HPC008 ၏လုပ်ဆောင်ချက် လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်
၁။ ရရှိသောဒေတာ လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ် ရောင်းအားနှင့်ပေါင်းစည်းပြီး ၀ ယ်ယူနှုန်းကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။
၂ လမ်းသွားခရီးသည်စီးဆင်းမှုကိုတိကျစွာရေတွက်သည်၊ စုစုပေါင်းခရီးသည်စီးဆင်းမှုကိုရေတွက်သည်၊ စံနှုန်းပြည့်မီပြီးအကွာအဝေးပိုကျယ်သည်။
၃။ HPC008 မှတဆင့်စင်္ကြံကြမ်းခင်းတိုင်းတွင်လူ ဦး ရေကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိပါ လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်.
၆။ HPC008 မှစုဆောင်းထားသောခရီးသည်စီးဆင်းမှုအချက်အလက် လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတူးဖော်မည်၊ ထို့နောက်ဒေတာများကိုပေါင်းစည်းပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်။
၇။ ကြွယ်ဝသောခရီးသည်စီးဆင်းမှုအချက်အလက်မှတ်တမ်း၊ အလိုလိုသိနှင့်ကွဲပြားသောအမျိုးအစားများ။
8. HPC008 ကို install လုပ်ပြီးပါ လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ် စတိုးဆိုင်၏တည်နေရာတစ်ခုစီ၌သင်စတိုးဆိုင်၌ခရီးသည်စီးဆင်းမှုသိပ်သည်းဆကိုတွက်ချက်ခြင်း၊ ရှုထောင့်မျိုးစုံမှအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ခရီးသည်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။
၉။ အဆောက်အ ဦး ၌သောင်တင်နေသောလူ ဦး ရေကိုရေတွက်ပါ။
10. HPC008 ၏ဆော့ဝဲ လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ် နေထိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
စီမံကိန်း ပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်များ စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်းများ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ DC12 ဖြစ်သည်～36V ပါ ဗို့အားအတက်အကျကို ၁၅% ခွင့်ပြုထားသည်
ပါဝါသုံးစွဲမှု 3.6W ပျမ်းမျှပါဝါသုံးစွဲမှု
စနစ် လည်ပတ်ဘာသာစကား တရုတ်/အင်္ဂလိပ်/စပိန်
စစ်ဆင်ရေး interface ကို C/S စစ်ဆင်ရေးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ
ပြင်ပ interface RS485 interface စိတ်ကြိုက် baud နှုန်းနှင့် ID၊ multi machine network ကိုထောက်ပံ့သည်
RS232 interface ကို စိတ်ကြိုက် baud နှုန်း
RJ45 ကိရိယာအမှားရှာပြင်ခြင်း၊ http ပရိုတိုကောလ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
ဗီဒီယိုထွက်သည် PAL, NTSC စနစ်
Operating အပူချိန် -35 ℃ ～70℃ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်
သိုလှောင်မှုအပူချိန် -40 ~ 85 လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်
ပျမ်းမျှရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိသောအချိန် MTBF နာရီပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်
တပ်ဆင်အမြင့် ၁.၉ ~ ၂.၂ မီတာ
0.001 lux (မှောင်သောပတ်ဝန်းကျင်) ~ 100klux (အပြင်ဘက်တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်)၊ အလင်းဖြည့်ရန်မလို၊ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အားမထိခိုက်စေဘဲတိကျမှုနှုန်း
EN 62471: 2008“ ဓာတ်မီးများနှင့်မီးအိမ်စနစ်များ၏ဓာတ်ပုံ-ဇီဝလုံခြုံမှု”
ကာကွယ်မှုအဆင့် IP43 (ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ waterjet ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်သည်)
အပူစွန့်ထုတ်မှု passive ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပူ dissipation
2.6--2.7 M ကို
2.8--3.0 M ကို
2.9--3.2 M ကို
3.2--3.8 M ကို
3.9-4.4 M ကို
4.4--5.1 M ကို
ဤစမ်းသပ်မှုရလဒ်သည်ပျမ်းမျှ ၁.၇ သန်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်အခြေခံသည်
MRB လူများကင်မရာ HPC008 ဗွီဒီယိုကိုရေတွက်သည်
ငါတို့မှာအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ် လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်, 2D, 3D, AI လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ်မင်းအတွက်လိုက်ဖက်မယ့်သူအမြဲရှိတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ၊ ငါတို့ကအသင့်တော်ဆုံးကိုအကြံပေးလိမ့်မယ် လူတွေကကင်မရာကိုရေတွက်ကြတယ် ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အတွက်
ကင်မရာရေတွက် HPC008 အတွက်လူများအတွက်အမေးအဖြေများ
အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးကောင်တာ၏နည်းပညာနိယာမသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးရောင်ခြည်များဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်လူများကိုတန်ပြန်ရန်တွန်းအားပေးသည်။ ကင်မရာကိုရေတွက်သောလူများသည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်ပုံတူများစုဆောင်းခြင်းဖြင့်လူများကိုရေတွက်သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်နည်းပညာသည်ကွဲပြားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကင်မရာရေတွက်သောလူများတိကျမှုသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးကောင်တာများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
၂။ ဒီကင်မရာက WiFi ထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုရေတွက်နေသလား။
၃။ ကင်မရာကိုရေတွက်နေတဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့အချက်အလက်စီးဆင်းမှုအတွက်မင်းရဲ့ဆော့ဝဲအစားအဲဒါကိုဖတ်ဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဆော့ဝဲကိုသုံးချင်တယ်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
မင်းရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအရ protocol နဲ့ API ကိုငါတို့ပံ့ပိုးပေးမယ်၊ ပြီးတော့မင်း data တွေကိုကြည့်ဖို့နဲ့မင်းရဲ့ software ကိုသုံးဖို့အတွက်မင်းရဲ့နည်းပညာရှင်တွေကိုငါတို့ရဲ့စက်တွေနဲ့အပြည့်အဝချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးမှာပါ။
၄။ ဤတွက်ချက်ကင်မရာ၏ရောင်းအားထောက်ခံမှုသည်အဘယ်နည်း။ Warr ဘယ်လောက်ကြာလဲanty? ဒီလူတွေတွက်ကင်မရာရဲ့နည်းပညာအားသာချက်ကဘာတွေလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအမြဲပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်။ website၊ email (သို့) အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအချိန်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အာမခံအတွက်အခြားကုမ္ပဏီအများစုသည် ၁ နှစ်သာထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂-၃ နှစ်ခန့်အာမခံချက်ပေးသည်။ သင်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လျှင်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှိအေးဂျင့်အားလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုပံ့ပိုးရန်အကန့်အသတ်မရှိအာမခံ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
၅။ ဒီကင်မရာကိုကောင်တာကထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေဘယ်မှာလဲ။ ရန် ရောင်း သို့ ဘယ်နိုင်ငံလဲ? မည်သည့်ဂန္ထဝင်တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများရှိပါသလား။
ကျွမ်းကျင်သောလူများတန်ပြန်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေနှင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့လက်လီ၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည့်အရေးကြီးသောဒေသများသို့ရောင်းချခဲ့သည်။ အကျော်ကြားဆုံးကိစ္စမှာကျွန်ုပ်တို့၏ HPC008 ကင်မရာကိုလူအားတက္ကစီဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးခြင်း၏ပြသနာကိုအပြည့်အဝဖြေရှင်းရန်ရှန်ဟိုင်း Pudong လေဆိပ်ကလက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းကိုရှန်ဟိုင်းသတင်းမှ“ အနက်ရောင်နည်းပညာ” ဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်ပါ YouTube ဗီဒီယိုတွင်တိကျသောနိဒါန်းတစ်ခုရှိသည်။
၆။ ဘယ်လိုလဲ လူတွေ ကောင်တာ စျေးနှုန်း? ပိုကောင်းတဲ့စျေးကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
အခြားနိုင်ငံများမှထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်မြင့်မားသောနည်းပညာ၊ စျေးနှုန်းသက်သာခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချမှု ၀ န်ဆောင်မှုတို့၏အားသာချက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်တာအပြည့်အ ၀ သည်ဒေါ်လာဆယ်ဂဏန်းမှဒေါ်လာရာချီအထိရှိသည်။ အသေးစိတ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားအသေးစိတ် quotation ပေးမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
တပ်ဆင်မှုသည်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ သင်ကအောက်ခံကိုဝက်အူများဖြင့်သာပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပြီးထုတ်ကုန်ကိုခြေရင်း၌မှီဝဲနိုင်သည်။ network cable နှင့် power supply တို့သည် plug and play ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းသည် ၅ မိနစ်အတွင်းပြီးစီးနိုင်သည်။
8. ကျွန်ုပ်တွင်ဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာရှိသည်။ ဤကင်မရာကိုရေတွက်နေသောလူများသည်ဗဟိုစာရင်းအင်းများပြုလုပ်နိုင်သလား။ အကျဉ်းချုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုဆိုင်ခွဲများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ ဆော့ဝဲသည်အလွန်အစွမ်းထက်။ ဒေသများခွဲခြင်း၊ ဆိုင်ခွဲများခွဲဝေခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ နေထိုင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အချိန်ခွဲဝေမှုအနှစ်ချုပ်စသည်တို့ကဲ့သို့အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များရှိပါကသင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မရ။
၉။ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်သည်စီးဆင်းမှုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဝန်ထမ်းစီးဆင်းမှုကန့်သတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်မင်းရဲ့လူတွေကိုရေတွက်တဲ့ကင်မရာကိုငါသုံးလို့ရမလား။
၂၀၂၀ အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကပ်ရောဂါအခြေအနေအတွက်လက်ရှိအကန့်အသတ်ရှိသော software ကိုအထူးတီထွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူကောင်တာအားလုံးသည် ၀ န်ထမ်းနေထိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုသိနိုင်သည်။ လက်ရှိ Occupancy control software တွင်တံခါးဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်း၊ နှိုးစက်စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်။
၁၀။ ကင်မရာကိုရေတွက်နေသောအခြားပုံစံများရှိပါသလား ၌ မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက 3D လူတွေလိုမျိုးကင်မရာကိုရေတွက်နေတာလား။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ တွင်လူကောင်တာပံ့ပိုးသူတစ် ဦး အနေနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးကောင်တာ၊ 2D လူကောင်တာ၊ 3D လူကောင်တာ၊ AI လူကောင်တာနှင့်စျေးပေါပေါမှစျေးများစွာအထိသင့်အတွက်ရွေးချယ်စရာထုတ်ကုန်များစွာရှိသည်။ ရိုးရှင်းသောမှ Hi-tech အထိ မင်းအတွက်အမြဲတမ်းတစ်ခုရှိတယ်။
၁၁။ ငါ့မှာလယ်မြေရှိတယ်။ ကျွဲ၊ နွား၊ သိုးတွေကိုရေတွက်ချင်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ AI လူများကင်မရာသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာဝတ္ထုများမှသူ့ဘာသာသူစုံလင်စွာသင်ယူနိုင်ပြီးအရာဝတ္ထုများကိုတိကျစွာနှိုင်းယှဉ်ပြီးရေတွက်နိုင်သည်။
၁၂။ မင်းမှာကောင်တာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာငါမြင်တယ်၊ ငါ့တိုင်းပြည်မှာမင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုငါရောင်းချင်တယ်၊ အဲဒါဟုတ်ပါသလား။ ဖြစ်စဉ်ကဘာလဲ။
အေဂျင်စီကိစ္စများညှိနှိုင်းရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုသည်။ ပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်သို့ရေတွက်နေသောလူများကိုမြှင့်တင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။ သီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းဝန်ထမ်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ယုံကြည်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ယခင်: MRB ခေါင်းတွက်ကင်မရာ HPC010
MRB ခေါင်းတွက်ကင်မရာ HPC010
MRB AI လူစုလူဝေးကောင်တာ HPC198
MRB 3D People counting system HPC009 ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သို့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများ၏ခိုင်ခံ့သောပံ့ပိုးမှုဖြင့် MRB သည်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။
လိပ်စာ: အခန်း ၈၁၈-၈၂၀၊ B အဆောက်အအုံ၊ St. NOAH၊ အမှတ် ၁၇၅၉၊ Jinshajiang လမ်း၊ Putuo ခရိုင်၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်။